Mecool M8S PRO W Android TV priedelis kaina nuo ...
အစ » ထုတ်ကုန်များ » Mecool M8S W PRO Android တီဗွီ Box ကို
အစဓာတ်ပုံ, ဗီဒီယိုနှင့်အသံ technique ကိုTV နဲ့ TV ကို set ကို-top boxMecool M8S W PRO Android တီဗွီ Box ကို
Mecool M8S W PRO Android တီဗွီ Box ကို
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ် 2019 14 ဒီဇင်ဘာ 23: 34
စျေးနှုန်းသမိုင်း MECOOL M8S PRO W Amlogic S905W 7.1 Android တီဗွီ Box ကို
€ 25,57 - 2019 17 သြဂုတ်လ
€ 25,73 - 2019 10 သြဂုတ်လ
€ 25,90 - 20194သြဂုတ်လ
€ 26,06 - 2019 27 ဇူလိုင်လ
€ 26,23 - 2019 20 ဇူလိုင်လ
€ 26,80 - 2019 14 ဇူလိုင်လ
€ 22,36 - 2019 10 ဇူလိုင်လ
€ 26,80 - 2019 12 မေလ
မှ: 2018 30 ဒီဇင်ဘာလ
အမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်း: € 26,84 - 2018 31 ဒီဇင်ဘာ
နိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်း € 22,36 - 2018 30 ဒီဇင်ဘာ
MECOOL M8S PRO W Amlogic S905W 7.1 Android တီဗွီ Box ကို
တီဗီ Andriod OS ကိုထောက်ပံ့တီဗီ Box ကိုအတူ Mecool M8S PRO W 2.4G
Mecool M8S PRO W S905W 2GB RAM ကို ROM ကို 16GB တီဗီ Box ကို
MECOOL M8S W PRO ကို Android 7.1 S905W 2GB / 16GB တီဗီ Box ကို
MECOOL M8S PRO Remote Control ကိုအသံနှင့်အတူ W ကတီဗီမှာ Android OS ကို TV ကထောင့်ကွက်
Mecool M8S PRO W S905W 2GB RAM ကိုအန်းဒရွိုက်တီဗီ OS ကိုထောက်ပံ့ Voice ကို Input အားထိန်းချုပ်ရေးနှင့်အတူ ROM ကို 16GB တီဗီ Box ကို
Voice ကိုထိန်းချုပ်ရေးနှင့်အတူ MECOOL M8S S905W 2GB PRO W / 16GB တီဗီ Box ကို
Bundle ကို MECOOL M8S S905W 2GB PRO W / 16GB တီဗီ Box ကို + Tronsmart TSM01
Voice ကိုထိန်းချုပ်ရေးနှင့်အတူ MECOOL M8S W PRO Android တီဗွီ Box ကို
MECOOL M8S PRO W 7.1 Android တီဗွီ Box ကို 2GB / 16GB အမေရိကန် Plug
MECOOL M8S PRO W ကတီဗီ Box ကို TV ကထောင့်ကွက် Android7.1.1 Amlogic S905W 2GB 16GB RAM ကို ROM ကို Quad Core
MECOOL M8S PRO WA S905W 2GB / 16GB တီဗီ Box ကို + Air ကိုကြွက် + Keyboard ကို
MECOOL M8S W PRO ကို Android 7.1 S905W 2GB / 16GB တီဗီ Box ကို + Air ကိုကြွက်
H.4 ကဗီဒီယို 265fps မှာ 4K မှတက်ကုဒ်ဖြုတ်ထောက်ခံပါတယ်ဒါက●တစ်ဦးက Full-30K က high-performance ကို SoC
● 2GB DDR3 + 16GB eMMC, ချဲ့သိုလှောင်မှု 32GB အထိထောက်ခံမှု, သင်, သင်ကြိုက်နှစ်သက်သမျှကို download လုပ်ပါစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်သူတို့ကိုခံစားနိုငျ
●ဒါဟာပေါ်တွင် run အန်းဒရွိုက် 7.1.1, သုံးစွဲဖို့ကောင်းလှ၏ဘယ်။ သင့်အနေဖြင့်သေတ္တာနှင့်အတူအိမ်မှာအကြောင်းအရာနှင့်ဖျော်ဖြေရေး၏လောကဓာတ်ကိုချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်
CPU ကိုဂိမ်းတစ်ခုကျယ်ပြန့်ကစားနိုင်ပါတယ် Quad-core Cortex-A53 ၏●တစ်ဦးကမြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်
● Built-in Wi-Fi 2.4G ။ ပံ့ပိုးမှုကို IEEE 802.11b/ g / n ။ သငျသညျအရည်အသွေးမြင့်မားသောဗီဒီယိုအတှေ့အကွုံခံစားရန်အဘို့အဖြေကိုပိုပြီးတည်ငြိမ် signal ကို
● HDMI 2.0 သင့် TV ဗွီဒီယိုနဲ့အသံ output ကိုပေးပို့ဖို့ပိုမိုမြန်ဆန်နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်
● Youtube, Netflix, HBO က, Twitter ။ သင်ဤထုတ်ကုန်ရှိပါကအဲဒီ network လုပ်ငန်းဆောင်တာအဘယ်သူမျှမပြဿနာတွေရှိပါတယ်
●ပံ့ပိုးမှု Miracast / Airplay, သင့်တီဗီရန်သင့်ဗီဒီယိုများဝေမျှ
●အဆိုပါအဝေးထိန်း2က x AAA ဘက်ထရီ (မပါဝင်) က powered ဖြစ်ပါတယ်
CPU ကို: ARM Cortex-A53
GPU ကို: မာလီ-450
မက်စ်။ တိုးချဲ့စွမ်းဆောင်ရည်: 32G
မော်ဒယ်: Mecool M8S PRO W က
ရမ်: 2G RAM ကို
RAM ကိုအမျိုးအစား: DDR3
ROM ကို: ROM ကို 16G
အမျိုးအစား: တီဗီ Box ကို
Processor ကို: Amlogic S905W
audio format နဲ့: AAC, ape, FLAC အ, M4A, OGG, WAV, WMA
ဓာတ်ပုံဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ:, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF
interface: 3.5mm အသံ, DC က 5V, HDMI, RJ45, TF ကဒ် USB2.0
ဘာသာစကား: အင်္ဂလိပ်, ဂျာမနီ, ဂျပန်, ကိုးရီးယား, Multi-ဘာသာစကား, မျက်မှောက်ရေးရာနှင့်တရုတ်
အခြားအ Functions များ: AirPlay, Miracast
power supply: တာဝန်ခံ Adapter ကို
ပါဝါအမျိုးအစား: ပြင်ပပါဝါ Adapter ကို Mode ကို
package အရွယ်အစား (L ကိုက x W x ကို H ကို) x ကို 17.90 11.50 6.20 စင်တီမီတာက x / x ကို 7.05 4.53 2.44 လက်မ x
package အလေးချိန်: 0.4200 ကီလိုဂရမ်
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား (L ကိုက x W x ကို H ကို) x ကို 10.20 10.20 2.10 စင်တီမီတာက x / x ကို 4.02 4.02 0.83 လက်မ x
ကုန်ပစ္စည်းအလေးချိန်: 0.1100 ကီလိုဂရမ်
Package Contents: တီဗီ Box ကို 1, 1 က x မှာ IR Remote Control ကို x, HDMI Cable ကို 1, 1 အင်္ဂလိပ်အသုံးပြုသူလက်စွဲစာအုပ် x x
2018 (Amazing) Mecool M8S PRO W - Android OS ကို TV - Voice ကိုထိန်းချုပ်ရေး - လက်အောက်တွင် $ 50
Убийца Xiaomi က Mi တီဗီ Box ကို? Обзор MECOOL M8S PRO W က Android ကို TV ကсголосовымпоиском။
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: Mecool M8S W PRO Android တီဗွီ Box ကို
X ကို TV ကထောင့်ကွက် 1, 1 က x မှာ IR Remote Control ကို, 1, HDMI Cable ကို x ပါဝါ Adapter ကို 1 x, 1 အင်္ဂလိပ်လက်စွဲစာအုပ် x
Mecool M8S W PRO Android တီဗွီ Box ကိုဗီဒီယိုများ
အဘို့အ 15 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Mecool M8S W PRO Android တီဗွီ Box ကို
Luiz Henrique - 2019 10 ဇွန်
Produto muito bom, တာဝန် Utila, principalmente pra mim Que tenho Uma Antiga ရုပ်သံ mais Que Nao éစမတ်တီဗီ။ Funcionou တာဝန် bem အီး aplicativos como Netflix နဲ့ Youtube ကို Eram Que minha prioridade က de uso ။ Entretanto ဏ uso မ dispositivo com foi တာဝန် Agradavel Nao IPTV ၏ apps များတည်ရှိနေ Uma Grande quantidade က de lista က de IPTV aqui မျှ Brasil Sub-frame ကို nenhum funciones အီး Ha တာဝန်hipócritas como se ELES fossem s ကို detentores dos direitos autorais da ကာန, ရုပ်ရှင်အီး Seri Liszt Pag disponibilizando ... Enfim eu queria အွမ် APARELHOS USARES Netflix ရုပ်သံပြီးနောက် da minha ကျွန်း ea Mecool Servis perfeitamente na! funcionalidades ဆောပိုလို boas, Emporias exploradas တာဝန် Nao bem por mim demais အဖြစ်! တစ်ဦး Pena, recomendo ခြိုငျ့။ တစ်ဦးက entrega စားရကြ၏ငါ့ကို surpreendeu, demorou bem menos Que ဆိုပါစို့။
Boris - 2019 10 ဇွန်
Прекрасныйတီဗီсоптимальнымсоотношениемцена / качествобокс။ Вселегконастраиваетсяиотличноработает။ Вработенеделю, сбоевненаблюдалниразу။ Wi-Fi ကိုипроводному Ethernet မူПодключал။ Разницынезаметил (роутервметре) ။ Температуранакорпусенадпроцессоромпосле 1 часаработычутьболее33С, блокпитания28С။ GB ကို Western Digital ကотОтличноработаетсကို USB HDD 320 1TB и။ Естьтемана 4PDA, всегдаможнообратитьсяк "коллективномуразуму။ Незаметил
Glenn - 2019 10 ဇွန်
ငါစိတ်ကြိုက်နိုင်ကြောင်းဒါကြောင့်ငါသည်ဤ MeCool M8 W က Android ကိုသေတ္တာတစ်ခု Roku မှ switched နဲ့ကျွန်မ wow အဆိုပါ Roku မကြာခဏအေးခဲနေသောခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဤ box က set up လုပ်ဖို့အချိန်အတန်ကြာကြာအပြစ်ကင်းစင်စွာအလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်ဟုပြောရန်ရှိသည်, ငါ Nova Launcher ကို installed ပင်မမျက်နှာပြင်နှင့် Desktop ပေါ်မှာကောင်းတဲ့ပုံတစ်ပုံနေရာထိုအခါငါ Kodi Chanel နဲ့ကျွန်မအကြောင်းကိုဖတ်ခြင်းသို့မဟုတ် Youtube ကိုအပေါ်အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူဒါကအများကြီးအမျိုးမျိုးသော apps များ / APK များကို install ။ ဒါဟာအလုပ်နည်းနည်းခဲ့ပေမယ့်သင်ကတစ်ကောလိပ်ပေးတစ်ချိန်ကလူအပေါင်းတို့သည်အပိုင်းပိုင်းအတူတူကျကြ "ကြိုးစား, အခုဒါကအကြီးတပ်ပြီး box ကို preforms ရှိသည်! ကျွန်မသဘောကျတယ်ကိုအကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုမှာသင်တို့ကိုငါဖွင့်မယ့်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာကဲ့သို့ဘရောင်ဇာနှင့်အတူအင်တာနက်လည်းကြိုးမဲ့မောက်စ်နဲ့ကီးဘုတ်ကိုသုံးနိုင်သည်ဆိုလိုသည်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တောင်မှငါက Google ကိုသွားနှင့်ရှာဖွေရေးအတွက်ရိုက်ထည့်နိုင်ပါတယ်ငါသိပ်ပိုပြီးဒီအံ့သြစရာ BOX နှင့်အတူငါကစွမ်းဆောင်ရည်င်နှင့်အတူအလွန်ဝမ်းသာပါတယ်လုပျနိုငျ! ဤအရာသည်အလွန်အလုပ်လုပ် device ကိုပါ! အဘယ်သူမျှမက, ဝေးငါ၏အမျှော်လင့်ချက်များထက်ကျော်လွန်!
Beelink AP34 Mini ကိုကွန်ပျူတာ